‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ भन्ने तस्वीर भाइरल भएपछि सरकारको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकार चुप लागेर नबसेको बताए । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले भने, यो प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरा साँघुरिदै गएको छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा उभिने निर्णय गरे सहकार्य गरेर अघि जाने बताएका छन् । बुधबार भरतपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले हठात रुपमा हिन्दु राष्ट्र हटाउँदा चौतर्फी मार परेको दावी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेस महामन्त्रीलगायतका नेताहरुले हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा दिएका कुराहरु सकारात्मक छन्, संस्थागत निर्णय गरेर आए कांग्रेससहितका शक्तिहरुसँग सहकार्य हुन्छ ।’
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा कुनै दबाव नरहेको बताएका छन् । तर, घटनामा संलग्न भएका आशंका लागेकालाई पक्राउ गर्दै सोधपुछ गर्नु पर्ने भएकाले हत्यारा पत्ता लाग्न समय लागेको बताए । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धानबारे छलफल गर्न प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई बोलाएको थियो । सांसदहरुले शान्ति सुरक्षाको अवस्था किन यति कमजोर भयो ? विगतमा राम्रो सफलता पाएको प्रहरी अनुसन्धान किन फितलो भयो ? निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरु किन पत्ता लागेनन् जस्ता प्रश्न गरे ।
अर्थ र कृषि समितिको बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित
मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बोलाइएको संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संयुक्त बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको छ । अर्थ समितिका अधिकांश सांसदहरुको अनुपस्थित भएपछि बिहान साँढे ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो । साढे १२ बजेसम्म पर्खदा पनि कोरम नपुगेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । सांसदहरुको कार्य व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
सप्तरीमा एकै दिन ७० वर्षीया बृद्धा र १४ वर्षीया बालिका बलातकृत भएका छन् । जिल्लाका छुट्टाछुट्टै ठाउँमा छिमिकीबाट ती बृद्धा र बालिका बलात्कृत भएको पीडितलाई उदृत गर्दै प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाका मुद्दा सुनुवाई प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अगाडि बढाउन थालिएको छ । ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ बनाउन छुट्टै ऐन चाहिने भएकाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले छिटो न्या दिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । खरेलको निर्देशनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’मा जस्तै मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको छ । आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ तथा डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३-३ रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको हो । खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ ।
आज गौरा पर्वको मुख्य दिन, प्रदेश ७ मा रौनक
१८ भदौ, डडेल्धुरा । प्रदेश ७ मा आज गौरा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ । गौरा पर्वको मुख्य दिन, आज अठवली अर्थात् अष्टमी हो । यस दिन गौराको पूजाआजा गरी मनाइन्छ ।